Ukuphupha nge-somnambulism Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga nokulala. Sihlala siphupha izihlandlo ezibini ukuya kwezihlanu ngobusuku, kodwa kunqabile ukuba siwakhumbule amaphupha ethu. Nazi ezinye iinguqulelo zamaphupha akho.
Xa ulele, umntu oleleyo uyaphakama ahambe okanye abonakale esenza izinto ezithile. Nangona kunjalo, akavuki kwaye kwakamsinya emva kokuba umntu oleleyo ehlala ebuyela ebhedini. Ukuba uvuka rhoqo ebusuku ngaphandle kokuzibonela, unokuba nengxaki yokuvuka kwakusasa ulale ekuseni.
Ukulala ngokulala kwenzeka rhoqo ngakumbi ebuntwaneni kunakubantu abadala: ngelixa ipesenti enye okanye ezimbini zabantu abadala zilala ngokungapheliyo kwaye rhoqo, zilishumi ukuya kumashumi amathathu eepesenti ebantwaneni. Nangona kunjalo, ngokubanzi, le nto inyamalala ngokuqala kokufikisa. Kukho amaxesha apho uhamba ebusuku kube kanye ebomini bakho kwaye ungaze uphinde emva koko.
Kwakukholelwa ukuba la luna ichaphazele le ndlela yokuziphatha, yiyo loo nto ikwabizwa ngokuba "kukukhotyokiswa yinyanga" (= "igeza"). Namhlanje kucingelwa ukuba ukuhamba ngokulala kunokubangelwa zizinto ezingaphandle. Esinye isizathu kukuba inkqubo ye-nervous system ayikakhuli ngokupheleleyo, ngakumbi kubantwana nakwishumi elivisayo.
Ukuba umntu uphupha ngokulala, ngekhe bakwenze oko ebuntwaneni. Unokoyika ukuzenzakalisa kwinkqubo. Okanye ubona omnye umntu elele kwaye umkhathalele. Ukutolikwa kwamaphupha, ezinye iimeko zephupha zidlala indima ephambili.
1 Uphawu lwephupha «somnambulism» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «somnambulism» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «somnambulism» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «somnambulism» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yamaphupha «somnambulism» imele ukutolikwa okuthandwayo kwamaphupha isilumkiso Umphuphi wamkela ngokungathandabuzekiyo into anqwenela ukungayiqwalaseli. Mhlawumbi kubomi bokwenyani sowuzakufikelela kwisivumelwano esiya kukubeka engxakini enkulu. Ukuba uphupha ukuba ulele, kukho ingozi yokwenene evela kwimeko enzima okanye kubantu ababi.
Iphupha lokulala ungaliqonda nakutoliko lwendabuko lamaphupha njengesicelo sokugcina amehlo akho evulekile: Jongana ne inyani, vula kwaye uthathe uxanduva ngezenzo zakho. Ngezenzo ezingekhoyo kweli lizwe, uphawu lwephupha lokuba phakathi ebusuku ngamanye amaxesha lukwatsala ingqalelo kwiipropathi kunye nobuchule angalaziyo umntu oleleyo. Ngendlela, oku kuyasebenza ukuba ufuna ukuvuka ephupheni, kodwa awungekhe uvuke.
Ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha, umfanekiso wephupha "somnambulism" uthetha iingxaki ukuba umntu ophuphayo unabanye abantu okanye eneempawu zakhe. Isenokungakhathali okanye ibonakalise uxabiso oluncinci kwabanye. Ubudlelwane bemihla ngemihla buhlupheka koku kwaye kukhokelela ekungonelisekini.
Zama ukukhumbula ukuba awuzinxibanga izihlangu xa uphupha malunga nokulala. Ukuba uphupha uhamba unganazi zihlangu kwaye ungenazihlangu, unokuba neengxaki zempilo, kodwa uya kuzifumana phantsi kolawulo. Nangona kunjalo, musa ukunxiba izihlangu el mundo Ukuphupha kukwabonisa ukuba usengozini yokuphulukana nokunxibelelana nobomi bakho bemihla ngemihla.
Ukuhamba ephupheni ngelixa, ngendlela engaqhelekanga, ukunxiba izihlangu, kubonisa njengomfanekiso wephupha umntu angaqiniseki ngombono wakhe kunye nophuhliso ebomini. Yeyiphi indlela elungileyo? Izihlangu ezibotshiweyo ezibonisa intambo zibonisa ukhuseleko lwexesha elizayo, izihlangu eziphakamileyo zibonise ukungazithembi okwandayo.
Dlala ngelixa uhamba ephupheni lakho oku kuchazwa njenge lonwabo Ngandlela zonke. Nokuba impumelelo yakho isekwe kwimpumelelo yakho, kuya kufuneka ulumke ungazicingeli kakhulu.
Nabani na ovuka ephupheni abalele kulo uya kuza kuphuhliso olutsha kunye nokuqonda kwakhe. Uhlalutyo lophuhliso lonke lwephupha luyanceda: Uzibone phi uhamba uhamba? Udibene nabantu, waqokelela izinto? Uzive njani ukukubona uhamba ebuthongweni bakho okanye kukho umntu ojikelezayo? Bunjani ubudlelwane bakho nalo mntu nyani?
Uphawu lwephupha «somnambulism» - ukutolikwa kwengqondo
Kuhlalutyo lwamaphupha, uphawu lwephupha "somnambulism" lubhekisa kwizinto ezahlukeneyo. Kwelinye icala, kuya kufuneka kuqondwe njengesimemo sokuba nefayile ye- ingqondo ephaphileyo ukujongana neengxaki ezikhoyo. I-subconscious ijonga iimvakalelo ezifihlakeleyo kunye noloyiko. Ephupheni, umntu oleleyo uqala ukujongana nabo.
Ukulala kwakhona kukwalatha ngokokuchazwa kwengqondo ephupheni iziphene. Umphuphi uhamba mhlawumbi ngesiqinisekiso sokuhambahamba ebuthongweni ebomini. Nangona kunjalo, ayinikeli ngqalelo kuphuhliso okanye kubantu ababalulekileyo. Iphupha liyenza icace into yokuba ukwenza njalo kuphoswa ngamathuba amaninzi, nakwindawo yabanye abantu.
Isimboli yephupha emelwe ngu "somnambulism" kuthetha ubufazi. Ngokutsho kohlalutyo lwamaphupha, iimvakalelo ebezisaziwa ngaphambili zingena ezingqondweni kumaphupha angamadoda. Kwiphupha labasetyhini, ukukwazi ukwenza izinto ngokungathandabuzekiyo kuza ekukhanyeni.
Umfanekiso wephupha ukwamele ukungaqiniseki kwaye ekutolikeni kwengqondo kuthetha ukunqanda ye-subconscious kubomi bokwenyani. Ukulala ngokulala emaphupheni luphawu lokwamkelwa kunye nokuhlangabezana ngokukuko neengxaki zengqondo.
Uphawu lwephupha «somnambulism» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokuchazwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "somnambulism" lumele ukufunyanwa kwelacala lethu elimnyama nelingaziwayo. Ukuphupha kuyabuqonda ubufazi bakho.